Tag: isiokwu | Martech Zone
Wednesday, September 30, 2020 Tọzdee, Ọktoba 1, 2020 Douglas Karr
Anọ m na-eme ka saịtị a dị mfe iji melite oge ọsọ na ịnwa ịkpata ego saịtị ahụ nke ọma na-enweghị iwe ndị na-agụ m. E nwere ọtụtụ ụzọ na m monetized saịtị ahụ… ebe a ha si ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ dịkarịa ala: Direct nkwado site na ụlọ ọrụ ibe. Anyị na-arụ ọrụ na mkpokọta atụmatụ na-etinye ihe niile site na webinars na mgbasa ozi mgbasa ozi iji kwalite ihe omume ha, ngwaahịa, na / ma ọ bụ ọrụ ha. Mgbakwunye ahịa site na usoro nke nyiwe mmekọ. Ana m eme ihe otiti na
Tọzdee, Septemba 17, 2020 Tọzdee, Septemba 17, 2020 Douglas Karr
Otu n'ime ihe kasịnụ banyere WordPress bụ mgbanwe iji wuo ụzọ mkpirisi. Czọ mkpirisi dị n'ụzọ bụ isi gbanwere ụdọ ị nwere ike itinye n'ime ọdịnaya gị nke na-ewepụta ọdịnaya dị ike. Ana m enyere onye ahịa aka n’izu a ebe ha na-ewere otu n’ime ngwaahịa ha wee tụgharịa ya na ngalaba ọhụrụ. Saịtị ahụ bụ ọtụtụ narị peeji ma ọ bụ ọrụ dị mfe. Dịka anyị na-arụ ọrụ na ndepụta ndepụta nsogbu, nke ahụ
Naanị Isiokwu You'll Ga -achọ maka WordPress: Avada
Tuesday, April 17, 2018 Tọzdee, Ọktoba 29, 2020 Douglas Karr
Ruo afọ iri, anọwo m na-azụlite omenala ma na-ebipụta plugins, na-agbazi ma na-emebe isiokwu ndị a na-emebu, ma na-eme ka WordPress dị mma maka ndị ahịa. Ọ bụrụlarị ihe na-agba agba agba gburugburu, enwere m echiche siri ike nke ukwuu banyere mmejuputa nke m meworo maka ụlọ ọrụ buru ibu na obere. M na-akatọkwa ndị na - ewu ụlọ - ngwa mgbakwunye yana isiokwu na - enyere mgbanwe a na - egbochi saịtị. Ha bụ otu aghụghọ, na-etinyekarị oke nke ibe weebụ ma na-ebelata nwayọ
Fraịde, Jenụwarị 6, 2017 Monday, November 2, 2020 Douglas Karr
Ọ bụ naanị otu afọ kemgbe m ikpeazụ reskinned anyị WordPress saịtị. Mgbe m masịrị ndozi ahụ, enwere m ọtụtụ ngwa mgbakwunye na nhazi iji mee ka ọ rụọ ọrụ otu m si chọọ ya. Na WordPress, nke ahụ nwere ike ịmalite ịkọwa ọdachi site na arụmọrụ arụmọrụ ma ana m ahụ mgbawa na ntọala. Ya mere, agara m ịchụ nta maka imewe nke nwere ike itinye ma ngosipụta buru oke ibu yana
Egbula CMS, Kpoo Onye Ome Okwu
Wednesday, February 22, 2012 Saturday, October 24, 2020 Douglas Karr
Nke a ụtụtụ na m nwere oké oku na a nwere ahịa banyere ha inbound ahịa azum. Ha kwuru na ha na ụlọ ọrụ na-ezukọ iji mepụta weebụsaịtị ha. Achọpụtara m tupu oku ahụ akpọọ ha na WordPress ma jụọ ha ma ha ga-anọgide na-eji ya. Okwuru na obughi ya kwuo na o di egwu… o nweghi ike ime ihe ya na saiti ya. Taa ya na ya na-ekwu okwu